हाम्रा लेख्ने मान्छेहरु
विवेक पौडेल - पाठकहरुले सबै राम्रो लेख्ने मान्छेलाई अनुसरण गर्न लायक व्यक्तिको रुपमा लिनु ठीक हुँदैन भन्ने यो "लेख्ने मान्छे" को विचार छ। पाठकहरुले कसैले भनेको-लेखेका कुरालाई जस्ताको त्यस्तै ग्रहण गर्नुको साटो प्रश्न गर्ने र आलोचनात्मक हिसावले विचारहरु ग्रहण गर्न जरुरी छ।
संविधानसभा भर्सेज स्थानय निर्वाचन
ब्रबिमकुमार - डेढ दशक भन्दा लामो अवधिदेखि स्थानिय निकाय जन प्रतिनिधि विहिन हुँदा नागरिकका दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्न सक्ने र पहुँचमा भएको एक मात्र राज्यका स्थानीय निकाय भुत्ते भएका छन्, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा हुने गरेका विकास निमार्णका कामहरु केही टाउके दलका स्थानीय नेताहरुको बाँडी खाने भाँडो भएको छ ।
–डा.आदर्श प्रधान - अध्यात्ममा आभामण्डलको महिमाबारे धेरै कुरा हुन्छन् । शिद्ध–महापुरुषहरुको आभामण्डलको फैलावटका कुराहरु पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । यसको उपयोगिताको सम्भावना झन बढेको छ, अहिले । वैज्ञानिकहरुले पनि आभामण्डलबारे थुप्रै अनुसन्धान गरेका छन् । आभामण्डल के हो ? यसको महत्व झन किन बढेको छ ?
१० वर्षमा करोड नेपाली विदेश
भुवन थापा - विदेशिने यही बृद्धिदर जारी रहने हो भने त अबको १० वर्षभित्रमा १ करोड नेपाली विदेशिने छन् अनि नेपालमा श्रम संकट उत्पन हुने छ, गाउँघरतिर बृद्ध बुढाबुढी र भुराभुरीबाहेक कोही हुने छैनन्। कृषि पेसामा श्रम संकट त अहिलेबाट देखिन थालिसकेको छ ।
व्यङ्ग्य:देश गज्जबको छ
भवसागर घिमिरे - यहाँ हरेक पटक रातारात ठूला दल भनाउँदाहरूको सल्लाह हुन्छ अनि भोलि बिहानै हिजोको कुरा मिलेन भनेर सबै तिर हल्ला हुन्छ। अरु के नै हुन्छ र ?
भुकम्पको धक्का, यसको असर र जोखिम
ऋषि राम पराजुली - गएराती भाद्र १४ गते रातको लगभग ११:४० को आसपासमा नेपालको मध्यभाग भुईचालोको कारण हल्लिन पुग्यो, सामाजिक सञ्जालहरु एकै पटक भुकम्पमय बने, सबैजना यसप्रति चनाखो बनेको देखियो। युएनडिपीको बिपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धि संस्थाले २००४ मा निकालेको रिपोर्टको आधारमा विश्वमा भुकम्पिय जोखिमको ११औं स्थानमा पर्ने देशमा हाम्रो तयारी कस्तो छ त ?
चरित्र नै भ्रष्ट छ हाम्रो
श्रीकमल द्विवेदी - भ्रष्टाचार गर्न पाउने अड्डामा सरुवा पाउँ भन्दै मन्दिरमा गएर भाकल गर्दै देवीदेवतालाई नै घुस खुवाउन जाने प्रचलन छ। एकदुई वर्षमा कर्मचारीले जग्गा जोडेर घर बनाउँदा उसलाई हाम्रो समाजले सफलता मान्छ । साधारण तलबमानको कर्मचारीबाट यो कसरी सम्भव भयो भनेर सोध्छौं? अधिकांश मानिसहरु आफूले खाईपाई आएको वैधअवैध स्रोत नहरियोस्, बाँकी सबै इमान्दार भैदिउन् र प्रणाली इमान्दारीसाथ चलोस् भन्ने आकांक्षा राख्छौं।
जोडिएको धुरी, एउटै बलेँसी, फाटेको मन
गुरु सुवेदी, एलडिओ, धनुषा - धनुषामा कहिँ नबिकेका कर्मचारीको बाहुल्य रहेछ । प्रष्टसँग भन्नुपर्दा खराबमध्येका उत्कृष्ट (अमोङ दि वस्र्ट, वेस्ट) । मेरै अफिसका १८ जना स्टाफ अख्तियार धाइरहेका छन् । मेरो आधा समय अख्तियारलाई जवाफ लेख्दालेख्दै बित्छ । यहाँ कति भ्रष्टाचार र अनियमितता होला, यही तथ्यले बोल्दैन र ?
बर्डफ्लु नियन्त्रणका वीभत्स दृश्य
रामचन्द्र भट्ट - पछिल्लो समयमा बर्डफ्लु नियन्त्रणका नाममा उपत्यकामा पाँच लाखको हाराहारीमा कुखुराहाँस मारिएका छन्। वैज्ञानिक तरिकाले नभई पहलमान शैलीमा मुंग्राले हिर्काएर, जिउँदै खाडलमा पुरेर पन्छीको हत्या गरिएको छ। सरकारी अधिकारीलाई यस्तो वीभत्स हत्याको शैलीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको बदनाम होला भन्दा पनि बर्डफ्लुका नाममा विदेशमा घुमघामको अवसर कम होला, त्यहाँ त्यस्ता वीभत्स दृश्यबारे जवाफ दिनुपर्ला भन्ने चिन्ता मात्र हो।
मतदाता बन्न भट्टीभित्र बाफिँदा
मनोज दाहाल - करिब ४० मिटर लामो ओरालो सकिएर अँध्यारो पार्किङमा छिर्ने बेला भट्टीको रापजसरी ह्वाससस्स तातो वाफ आयो । पार्किङको मुखमा लाइन लागेका मानिसहरू ऐया र आत्थु गर्दै थिए । अक्सिजन छिर्ने ठाउँ कतै थिएन । मानिसहरूको तातोले सारा पार्किङस्थल रापिएको थियो । बिदाको दिन यस्तो भट्टीमा बिहानदेखि बसेर मतदाताको नाम दर्ता गर्दै फोटो खिच्दै थिए विचरा कर्मचारीहरू ।
सामुदायिक रेडियोमा काठमाडौंकै स्क्रिप्ट
विपुल पोखरेल - लमहीदेखि काठमाडौंसम्म सुनिने समाचारको स्क्रिप्ट एउटै । समाचारको प्राथमिकता पनि एउटै । ७ वटा समाचार सुन्दा तीनवटा काठमाडौंबाट प्रशारण हुने ‘नेटवर्क’हरुका समाचार हुक गरिएको । स्थानीय रेडियोले समाचार वाचन गर्दा पनि काठमाडौंकै स्क्रिप्ट । स्थानीय मानिसका सफलताका कथा किन समाचार बन्दैनन् ? उनीहरुलाई कृषि तथा अन्य व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्ने विषय किन प्रमुख समाचार बन्दैनन् एफएमका बुलेटिनमा ?
दिल्लीको राजनीतिमा प्याजको स्वाद
वीरेन्द्र केएम - सन १९९८ मा भारतको केन्द्रीय सत्ताबाट भारतीय जनता पार्टीले हात धुनुमा प्याज एउटा महत्वपूर्ण कारण थियो । अहिले फेरि दिल्लीमा प्याज राजनीतिले पिटेको छ । भारतीय मिडियाले अब सत्तासीन अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी प्याज राजनीतिबाटै सत्तामुक्त हुनसक्ने सम्भावना प्रस्तुत गर्न थालेका छन् ।
सञ्जीव पोखरेल - समाचार घटनाका विवरण मात्र हैनन् । पत्रकारिताका अध्येताहरूले यसलाई अझ राम्ररी वर्णन गर्न सक्लान् । मेरो सामान्य बुझाइमा समाचारभित्र राजनीति र कवितात्मता (अङ्ग्रेजीमा भनिने politics and poetics) लुकेका हुन्छन् । लेख्ने, पढ्ने र विश्लेषण गर्नेले हरेक समाचारलाई निश्चित र फरकफरक ढङ्गले बुझेका हुन्छन् ।
यहाँ पृथ्वीनारायणको अपमान हुन्छ, मरिचमानको के कुरा ?
विष्णु बुढाथोकी - हिजो खलनायक मानिएका व्यक्तिहरु आजका दिनमा सवल नायक कहलिए पनि सही आचरण र व्यवहार अपनाउन नसके वर्तमानमा नायकको भूमिकामा रहेकाहरू भोलि कुनै दिन इतिहासको कठघरामा उभिँदा कुख्यात खलनायक सावित हुन सक्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा भलै राज्यबाट राजकीय सम्मान पाएछन् भने पनि भावी पुस्ताले अहिले मरिचानलाई दिएजस्तो नागरिक सम्मान नभई दण्डित गर्न सक्नेछन् ।
स्वतन्त्रताका लागि नरक रोज्न तयार छौँ कमरेड !
नवराज लम्साल - पानी हो भन्दैमा/पोखरी र नदी एकै हुँदैन/एकै हुँदैन उसको कञ्चनपना/र प्राण दिने अक्सिजन/कैदी जीवनको अभ्यासमा रमाउने पानीहरुले/पोखरीमा आफूलाई अभ्यस्त गरे भन्दैमा/म नदी हुन पाउन्न र कमरेड ?
एउटै बाटो जनमत संग्रह
दिनकर नेपाल - चारवर्षे कसरतमा नसुल्टिएका गाँठाहरु अब एक वर्षमै मिलाउँछौं, अझै छ महिनामै मिलाउँछौं भन्दै हिँड्न थालेका छन्, चुनावले 'मतवाली' बनाएका नेताहरु। ठूलो ऐतिहासिक भूल भएको हो, मौका गुमाएकै हौँ र यो-यो कारणले यति धेरै समय र धन खर्चेर पनि केही गर्न सकेनौं भन्ने आँट कोही गर्दैन ।
हत्यारा श्रीमती र छोरीलाई १० लाख दिएर सरकार जोकर बनेपछि ...
किरण भण्डारी - यो काण्ड अघि वा पछि पनि रेग्मी र घिमिरे काँचको पर्दामा झुल्किरहेकै छन्। उनीहरुको बडी ल्याङ्वेज उस्तै छ। रेग्मी र घिमिरे सधै‌ गम्भीर देखिन्छन्। सामान्यतया: उनीहरु हाँस्दैनन्। हत्यारा पत्नी र छोरीलाई १० लाख दिएर उनीहरु जोकर मात्र भएका छैनन्, जग हँसाएका छन्।